‘सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने राष्ट्रपतिकाविरुद्ध बोल्न पाइन्छ’ | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २८ माघ २०७७, बुधबार १५:२५ |
बोल्न पाइन्छ । हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ । नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन । सर्वसत्तावादकोविरुद्ध बोल्न पाइन्छ । संविधानको चीरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । संविधान र कानुनी राज्यको खिलापमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अध्याँरा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ ।
वि. सं २००७ सालदेखि २०४६ साल, ६२/६३ सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरुले भन्छन्, नागरिकहरु सार्वभौम सम्पन्न हुन् । त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन । त्यसैले बोल्न पाइन्छ ।
हामी यहाँ छौँ । यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो । आज दरबारमाजस्तै रजाईं गर्नेहरु संघर्षका कठिन दिनहरुमा कहाँ थिए दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र हजारौँ शहीदहरुको बलिदानभित्र र हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धीहरुलाई एकै रातमा एउटा जंगी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बर्खिलाप गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ । हामी बोल्न जन्मेका हौँ ।
नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ । त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ । त्यसैले आज काठमाडौँका मध्य सडकका पेटीहरुमा छरपस्ट मानवसागरले भन्छ, खड्गप्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन् । ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ । जब बादशाह या तानाशाहले आफ्नो कद घटाउँदै घटाउँदै जान्छन्, त्यतीबेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्लाअग्ला कदका प्रतीमा मात्रै होइन, बुख्याँचाहरु बनाउँछन् । खड्गप्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन् ।
यो अधोगति हो । त्यसकारण यहाँ केही चार्जहरु छ, हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको सहायकजस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई खुसुक्क सहीछाप गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्मानीय पद होइन, संस्था हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो । तर, त्यो संस्थाकाविरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन मैँले । त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरंकुशताको साक्षी बस्छ र त्यसको एउटा व्याधा बन्छ भने त्यस्ता पात्रको विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ । कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर ?
एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर ? बोल्न पाइन्छ । महिला अस्मिता त त्यतीबेला बलात्कृत भएको छ, जहाँ भागिरथी भट्टजस्तै, निर्मलापन्त जस्तै कलिला किशोरीहरुको बलात्कार र हत्या भएको छ, त्यतीबेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, खण्डित भएको छ । त्यसकारण तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहंकारी, कसैलाई नमान्ने, सबै कुराको सर्वज्ञानी, सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिकाविरुद्ध बोल्न पाइन्छ । यहाँनेर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन । कुनैपनि पदमा लिंग हुँदैन । त्यो सार्वजनिक पद हो । त्यसैले बोल्न पाइन्छ । आज, १८ वर्षसम्म विद्या भण्डारीले एउटा प्राइभेट कम्पनी बनाएको अनेमसंघ (अखिल नेपाल महिला संघ) भन्ने संस्था छ । त्यसका सदस्यहरुले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन् । मलाई सुन्न, पढ्न र हेर्न मन छ, भागिरथीका हत्यारालाई कारबाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगे कि पुगेनन् ? मलाई प्रश्न गर्न मन छ ।
एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु कि न्यायाललयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद पुनर्स्थापना नहुने कुरै छैन । यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने यहाँ खड्गप्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेको विद्वान अधिवक्ताहरुले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकारमात्रै हुनेछ । जुन कानुनमा, संविधानमा लेखिएको हुनेछैन । यो व्यवस्थाको हामी खिलापमा छौँ । सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत, संविधानसम्मत फैसला गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । यदि यो विश्वास डग्मगायो भने न्यायालय राज्यको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
जाँदाजाँदै म भन्न चाहन्छु, यो खड्गप्रसाद एउटा व्यक्ति होइन, हामी व्यक्तिकाबारेमा बोलिरहेका छैनौँ, यो संस्कृति हो र प्रवृत्ति हो । प्रचण्ड, माधव नेपाललाई म भन्न चाहन्छु, यहाँहरु हजारौँलाई साक्षी राखेर यो लडाईं हामी जित्नेछौँ र जितिसकेका छौँ, अब खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिल्यै नदोहोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मन्चबाट तपाईंहरुले घोषणा गर्नुहोस् । हाम्रो यो लडाईं खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो । लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो । यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौँ जनताहरुलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ । न कि एउटा पात्रको विरोध । यो विरोध होइन ।
(नेतृ झाँक्रीले बुधबार काठमाडौँमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको वृहत सभालाई गरेको सम्बोधनमा आधारित)
Previousअख्तियारका कर्मचारी कसैको भय त्रासबाट विचलित हुन हुदैँनः प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइँ
Nextमतदाता नामावली अद्यावधिक शुरु
३२ जिल्लामा एमाले र माओवादीले टुङ्ग्याए भागबण्डा (सूचिसहित)
३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०६:२६
७ असार २०७५, बिहीबार १५:२९